Azithandeki - Inxalenye 20 | Apg29
Azithandeki - Inxalenye 20
Ukuqhubekeka webali ebuhlungu ebuntwaneni wam umntwana ongafunwayo.
eklasini yam isiqwenga afunda nabo eklasini yam endala ukuba xa ndisiya esikolweni Torpa. Bona baya e phakathi kwesakhiwo high school ngoxa yaphelela ngokoqobo egumbini lwesakhiwo lume. Ukuze ufumane neklasi ubudala, kwafuneka ndiye gabhu epasejini elide uze nisinga ekunene. Kwathi ukuba wenza njalo maxa wambi.
Ngesinye isihlandlo, ndadibana zamaKristu, ukuba lo mfo ukuba kwenzeka balwa nokudubula yesikolo, kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Andazi ukuba ukukhumbula into sathetha ngayo kodwa ukuba baqolile. Lwa sathetha apho phakathi izihlwele abanye abafundi ngexesha lekhefu nezitulo, neelokhari zesikolo kunye iibhatyi ziya ngequbuliso intombazana yeza kum athi:
"Anizange na hlambi ekhaya nikhe nihlambe iinwele zakho kutyetyiswa?"
Ndothuka yaye wayengazi ukuba athini, yaye nje cwaka. UmKristu wayengazi ukuba ibiya kuthi xa wayezama chela waxolisa off. Ekubeni le ntombazana wavuma. Ndandingazi ukuba wayengubani, kodwa ke ebuhlungu kakhulu kum.
Kwakubuhlungu kuba bathuthunjiswe nenqatha iinwele kutyetyiswa. Sicombululo sazo kuyo, ndandisazi ukuba uhlamba ngakumbi okanye ubuncinane ayinakulukhukulisa rhoqo, kodwa wayengekho apho foster umama. Kamsinya nje ndandifuna ishawa okanye ahlambe iinwele zam ngoko andizange ndifumane nto. I bahlupheka ekhaya kuba nako ukuthatha ishawa ndaza liwuthuthumbisa esikolweni ngenxa yokuba kwakufuneka kuhamba kunye iinwele zam kutyetyiswa. I wakhathazeka waza weva kakubi kakhulu ngayo waza waba nokuba kwezinye izinto kwaye udandathekile bam ukuzithemba sele elisezantsi.
Mhlawumbi ukuziphatha umama Kukhuthazwa opsykologiska yemvelaphi kwayo. Uye wafunda ukuba asindise ngayo yonke into. Le ngcamango asokolayo kuhamba naye iminyaka emininzi, nokuba xa kakuhle ngokwezimali. Wavuma ukuba yena akazange abe nto, kodwa bahamba iimpahla eligugileyo, kunye nabadala. Yena waba ngaphezu ukuthenga into entsha kwaye fresh, kodwa yena akazange.
Okanye ukuziphatha ukuba wayesoyika eyakho kabawo. Andazi, kodwa ke iminyaka emininzi sele kakhulu loyiswa ilizwe nguye. ngamanye amaxesha wayethi izinto elimsulwa malunga umyeni wakhe ukuba thina bantwana xa abaziva.
Xa ndicinga ngako oko, yena izinto zange ezinjalo ngaye, kodwa kwelinye icala, wathi ngokubanzi soze nto. Ngaphandle kokucela lizwi, ukuba uye kwenye nekharavani yakhe. Umama wam begazi babengamazi apho okanye wenza. Ukuba ukuba wakhalaza thina bantwana, kodwa wathi ngqo kuye. Ndandiqala ukubona ukuba ukuxambulisana, kodwa le yokuziphatha yaba ingcaphukiso enkulu. Unxibelelwano phakathi kwabo labafileyo, kwaye ke le nto yokuba ndikhule nayo. Wena akazange athethe omnye komnye.
Utata wam foster ndatshaya umbhobho, awa zenzayo ukususela kwiminyaka elinesine, kodwa yena andinangxaki utshwala. Yaba vodka kunye nezinye iibhotile utywala kwithala kwi indawo yokugcina, kodwa akazange wayesela yena kubo, kodwa kube kanye kuphela kuyo kwakukho iindwendwe ekhaya ukuba wenza schnapps kancinane.
Kodwa ngoku emva iinwele zam kutyetyiswa. I haunted koku, kodwa wayengazi ukuyisombulula njani na. Ngelo xesha amakhwenkwe nonwele ixesha elide, ebendinalo. Ndandifuna iinwele phezu ezindlebeni zam, ukuze bangabi kuba ebonakalayo. Ndibe ngaphezu nakanye uxhatshazwa ngenxa yokuba enkulu eveleleyo iindlebe njengoko "amaqabane 'bam, lammonxoza phezu kwabo ngasemva kunye ngeminwe yabo ngoko ebomvu ngokucacileyo. Kodwa ngenxa yokuba iinwele yam kutyetyiswa yaye amanqatha ngoko zange entle, kodwa hung lank, emabi phantsi emhlabeni ngeendlebe. Oh yhini Ndzi bathuthunjiswe iinwele zam lank!
Xa waba iqatsela ekuyeni ekupheleni ukuwa yaqalisa abantwana isiJamani esikolweni. Enye inkwenkwe nentombazana. Bona anganyathela ibhasi kwindawo yokumisa kum. Babenethemba impahla encinane eyahlukileyo kunathi balwa njengoko ebona. Le ntombazane elide, braids entle, yaye lo mfana ibhulukhwe nangona imozulu wawusondela esibandayo. Kodwa ke wayefuna ukuba bahlale ndawonye umfana lank iinwele kutyetyiswa ndikwibhasi yesikolo. Ndikhumbula ukuba izihlalo ecaleni kwam bezingenabantu kodwa bahlala ngasemva ebhasini. Ndandicinga ukuba kungenxa ndandihlekwa ngoko babeza beze kwiqela kunye mih kwaye ngokwabo ahlutshwe.
Ukugqiba kwam ibanga lesithandathu, nam amanqaku iintwala. Andizange ikwazile ukwenza kakuhle esikolweni Torpa kuba ukoyikiswa kangaka uxhatshazwa. ithemba yam nje kubanjwa phantsi izihlangu, kodwa kwakungekho nto. Ngenxa yokuba ndibe ndifumane kude nabaxhaphazi bam, mna wafakwa kwiklasi ezahlukeneyo kwisikolo semfundo ephakamileyo apho bafunda isantya kancinci ukuphumla ngakumbi. Emva koko wahamba kakuhle kakhulu kum. Ndayikhwela kakuhle kakhulu eklasini kwaye ke akukho namnye endifunda nabo abo uxhatshazwa kum. Bonke abahlobo, nokuba ababhaliswanga ayeba ezinye okanye sazi kubo.
Kwakhona saba abathile basemzini eklasini ekube eqhelekileyo njalo ngelo xesha. Enye yaseLebhanon, leyo kwiminyaka emibini ubudala nenxalenye yethu sonke, omnye eTurkey enye evela eGrisi. Kwakukho into ingxaki nabo baze bandigezele okanye nabani na.
Njengoko Bendiya kamva kuphela kwisikolo samabanga aphakamileyo kwibakala 9, mna ubogqitha bonke eklasini yaye 4.7 nge-avareji. Ngelo xesha babe Isikali esimanqaku ezintlanu-esikolweni. Omnye kwaba babi, ngelixa indawo yesihlanu engcono.
Nangona kwakungekho namnye kwiklasi wam yokungcungcuthekiswa kum ngoko kwakukho abafundi abavela kwezinye iiklasi owenza loo nto. UStefan, a elide ekubekwe inkwenkwe mhlophe, wayethabathe kwi umsebenzi bekwenza kum. Waba kumemelela izinyeliso kum ngoko bonke abafundi ngeenxa nako ukuva oko. Kwaba ehlazweni iintloni. Andazi kutheni wenza njalo. Kwaba nje njalo. Yaba iqashiso bam nam thaca kuyo. Ebendinalo ukususela ekudalweni yokuqala bakhulela kuyo ke mna bendingazi nantoni na enye.
Emva kokuba ndibe kwisikolo samabanga aphakamileyo agqitywa, wakwazi ukuqhubeka ze baxhaphaze kum kamsinya nje wandibona naphi na. Andizange ukuqonda isizathu sokuba uziphethe.
Mna ebomini bam ingqiqo okulambathayo ulwalathiso. Ngaxa lithile emva kosuku lezemidlalo eziququzelelwe sisikolo ngoko ke zange bafumane indlela ebuyela esikolweni apho ibhasi aye.
Xa ebhadula endleleni ndadibana abanye abafundi kwisikolo sam owayehamba. Ndagqiba ekubeni ukubabuza indlela. Bamele ukuba waphawula indlela ezilahlekileyo kwaye awuqinisekanga Ndajonga. Phantse nangoko baqalisa lokuza ze baxhaphaze nam kuba andikwazi kuba indlela. Bambiza me "ukujingxela" apho nabo beza kubiza kum kwixesha elizayo yesikolo.
Kodwa akhomba kunjalo ngaphandle kokuba rktingen ekunene ukuba ndathi, Unga ungaya ukuya esikolweni. Andizange ndikwazi ukuqonda isizathu sokuba Babesibutha kum ngenxa yokungamfumani apho. Ndiyabazi kunzima.
LANDELA Uthotho WAM azithandeki
Inxalenye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Eli serial ibali lobomi bam ukususela ebuntwaneni ukuya phambili. Ndithi ze kwaye sivuma. A lot andizange ndinixelele ngayo ngaphambili. Amanye amagama kweli bali kukho wasentsomini.
Vecka 25, torsdag 20 juni 2019 kl. 15:36